Covet Fashoni, uve nyanzvi yekushongedza | IPhone nhau
Tora nzira kuburikidza neApp Store kuti uone kuti ndedzipi mhando dzekushandisa dziri kubudirira, uye chokwadi ndechekuti isu tinowedzera kuwana zvimwe zvemukati zvakanangana nevakadzi kunyanya muzvitoro zvekushandisa. Tinowana kubudirira kwese, Covet Fashoni chishandiso chiri kukonzeresa kutekenyedzwa muApp StoreIve yave iri gumi yepamusoro pamataiti kwevhiki dzinoverengeka izvozvi uye isu tichaenda kukuudza iwe nei. Unogona kuve nyanzvi yekushongedza nekuda kwemutambo unonakidza unonzi Covet Fashoni, kana iwe uchida fashoni yevakadzi, usapotse.
Isu takanga tawana mitambo yakawanda muApp Store yakanangana nefashoni, kugadzira magadzirirwo, kuigovana uye kuve maaces ekusona. Nekudaro, Covet Fashoni yatora ichienda kumberi, isingade kumira mukusika, asiwo chokwadi chekubatanidza zvipfeko zvedu uye zviise mukutarisa kwenzvimbo kuitira kuti vasarudze kuti zviri mufashoni here kana kuti kwete, kana iri tsika chaiyo kana kuti kwete, uye iwe une mukana wekumaka.
Iwe unoda fashoni? Tamba Covet Fashoni, mutambo wevanomanikidza vatengi. Joinha mamirioni evamwe vakadzi vefashoni kuti uwane zvipfeko uye zvigadzirwa zvaunoda, uye ugozivikanwa nekuda kwesitayera yako! Fudza yako yekutengesa kupindwa muropa uye gadzira zvipfeko mune ino fashoni mutambo wakagadzirirwa kuti uwedzere hunyanzvi hwekugadzira. Taura yako yakasarudzika kuravira nekutenga zvinhu zvakajairika zveKwadhiropu yako, uchibatanidza Masitaera eakasiyana Matambudziko Matambudziko, uye kuvhota iwo Masitaera evamwe vatambi. Uyezve, kuhwina wakasarudzika mu-mutambo mibairo yeZvitaera zvako zvinosvika 4 Nyeredzi kana kupfuura!
Dhizaina iwo akakwana maitiro kubva kuzviuru zvezvipfeko uye zvekushandisa. Makeup kuverenga zvakare.
Vhotera chipfeko chakanakisa, sarudza chiri kupisa paCovet Fashoni.
Tamba neshamwari dzako, tora mazano pane zvipfeko zvako uye ugovana kubudirira kwako navo. Iwe unogona kujoina haute couture yakasimba kusangana neshamwari kana kubatana zvakananga kuFacebook kubva kuapp
MuCovet Fashoni, unogona zvakare kutenga zvese zvaunoona, sezvo zvakawanda zvezvishongedzo kana mbatya dzaunoona zvichizowanikwa muhupenyu chaihwo. Inotora 87 MB chete uye inowanikwa mune zviuru zvemitauro. Inoenderana ne chero chishandiso cheIOS chakakwira kupfuura iOS 7Kuwedzera pakuve wepasirese, ndiko kuti, isu tinayo ye iPhone, iPad uye iPod Kubata. Zvisinei, yakabatanidza kutenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Covet Fashoni, iva nyanzvi yekugadzika nemutambo uyu
Hurumende yeIndia haibvumidze Apple kutengesa zvigadzirwa zvakagadziridzwa